आगन्तुक परियोजनाहरु | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
यो ठाउँ हो जहाँ तपाइँ तस्विरहरू अपलोड गर्न र टिप्पणीहरू छोड्न सक्नुहुनेछ तपाईको परियोजनाहरूको बारेमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। पुरानो साइटको पुरानो परियोजनाहरू हुन् यहाँ.
बुझाउने एन्डोपिन्टेन Wed, मा, 09 / 06 / 2017 - 04: 56
इनिन्रude 3hp 3303S लम्बाईफ्ट समस्या
म '63 इनिन्रूड 3hp, लम्बाईफफ्ट संस्करण छ। मैले दुई वर्ष पहिले पूर्ण टुन-अप गरेँ, तर मैले पावरहेड (क्रान्कशाफ्ट साइड) खोल्न सकेन जुन यो गर्मीको बेला मैले झुकिरहेको थिएँ, केही अचानक ड्राइभहाउस र क्रान्कशाफ्टको बीचमा बिग्रियो। क्रान्कशाफ्टले अब ड्राइभहाउस (र प्रोपेलर) बदल्न सकेन। मोटर को लोअर भाग ठीक छ। जब मैले इग्गेशन ले दूर गरे र फ्लाईवाइल लाई घुमाए, मैले देख्न सक्छ कि यो दुवै सिलिन्डर मा पिस्टन को रूप मा यो चाहिए। के हुनसक्ने कुरा क्रेनकशाफ्ट जडान हुन सक्छ कुनै तरिकाले तोक्न सक्छ? Driveshhaft शीर्ष टाउको (पावरहेडमा) अजीब-फ्लास्चर, मेरो '65 जॉनसन एक्सएनमक्स एचपी' भन्दा फरक फरक छ, जसमा यसको सामान्य बोरन (स्टार-जस्तै) टाउको छ।
बुझाउने ttravis गुरु मा, 09 / 14 / 2017 - 11: 49
जवाफ इनिन्रude 3hp 3303S लम्बाईफ्ट समस्या by एन्डोपिन्टेन
म यो प्रयास गर्न चाहन्छु ...
म निचो इकाई बन्द गर्न प्रयास गर्छु र मोटर चलाउन चाहन्छु कि यो दौडिनेछ। यदि पावरहेडको साथ कुनै समस्या छैन भने, तपाईंलाई गियरसेज जान सकिन्छ। निम्न इकाई गियर तेल जस्तो देखिन्छ? यो हुन सक्छ कि छापहरू खराब भए र तपाईंले आफ्नो गियरहरूमा पानी पाउनुभयो जसले केहि समय बसोबास गर्न तिनीहरूलाई रोक्न सक्छ। तपाईले ईबे किन्नु चाहानुहुन्छ कि तपाइँ राम्रो भाग मोटर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वा कम से कम एक राम्रो निचला इकाई संग कि तपाई पसल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिस्थापन भागहरू उपलब्ध छन्, तर तपाईंले तुरुन्तै आफैलाई खोज्नु भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला यो सबै लिने प्रयास गर्नुहोस् र सबै चीजहरू सफा गर्नुहोस् र नयाँ मुहरहरू सँगसँगै सँगै राख्नुहोस्।
बुझाउने ricklummer मा मंगल, 04 / 24 / 2018 - 09: 07
यो त्यहाँ एक कतरनी छैन
बुझाउने gameroomfan मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 09 / 10 - 2017: 13
ईनिरेड 25 एचपी बिग ट्विन (मोडेल 25018) कुनै सुरुवात / लेक कार्ब
सबै भन्दा पहिले, मलाई यो महान वेब साइट को सुरू र बनाए राखन को लागि धन्यवाद गरेर शुरू गरौं!
मैले हालै इन्जिन माथि अधिग्रहण गरे। यसलाई अन्तिम दौड हुँदा सञ्चालन राम्रोसँग भनिएको थियो।
तथापि, यसलाई सुरू गर्न प्रयास गरे पछि, र केहि निरीक्षण गरेर, मलाई मेरो शंका छ। यसो भनिएको छ, मैले स्पार्कको लागि जाँच गरें र प्रमाणित गरें। यद्यपि, मैले उच्च गति सुई प्याकेजिङ्ग नट जडानबाट कार्ब डेरिब्ल्लिङ ईन्धनलाई ध्यान दिएँ। साथै, कार्ब गला क्षेत्रमा धेरै धेरै ईन्धन।
मैले कार्बसलाई छुट्याएँ र पत्ता लगाए कि फ्लोट सेटिङहरू बन्द गरियो। फ्लोट पुरानो शैली कार्क हो। म अनुमान लगाउँदै कम्तिमा केहि केहि मेरो कुनै सुरूवात समस्या मुख्य फ्लोट वाल्व को कारण ठीक देखि बन्द छैन, या त खराब / गंदा सीट को कारण, र / या अनुचित फ्लोट सेटिंग्स को कारण बाढी को कारण बन रहेको छ।
त्यसकारण मैले एक कार्ब किट र नयाँ फ्लोटको आदेश दिएको छु। यहाँ मेरा प्रश्नहरू छन्:
1) फ्लोट सेटिङ्हरूमा मैले फेला पार्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो जानकारी थियो: 1 / 32 भन्दा बढी "कार्ब शरीरको शीर्ष किनारासँगको स्तर। र 1 1 / 4" फ्लोट ड्रप। के यो सहि छ?
2) म सुई प्याकेजिङ्ग मा अधिक भेटिन्छ havent। प्याकिङ खराब हुन सक्छ, यसैले रिसाई कार्बमा योगदान गर्दछ? नयाँ वा प्रतिस्थापन प्याकिङ के लागी तय छ?
बुझाउने ttravis गुरु मा, 09 / 14 / 2017 - 11: 55
जवाफ ईनिरेड 25 एचपी बिग ट्विन (मोडेल 25018) कुनै सुरुवात / लेक कार्ब by gameroomfan
म सँधै फ्लोट ...
म सँधै फ्लोट गर्दछु यो स्तर हो। स्तरमा, सुईले कटोरामा ईन्धनको प्रवाह बन्द गर्नुपर्छ। म केहि पनि उपाय छैन।
नयाँ कार्ब किटमा सुई प्याकेजिङ्ग समावेश हुनेछ जुन स्थापना गरिएको हुनुपर्छ। तपाईंको कार्बलाई खतरनाक हुँदैन जब सुरक्षामा खतरा हुनेछ।
बुझाउने gameroomfan मा शुक्र, 09 / 15 / 2017 - 16: 03
जवाफ म सँधै फ्लोट ... by ttravis
ठीक छ, जवाफको लागि धन्यबाद ...
ठीक छ, जवाफको लागि धन्यबाद। कार्ब किट्स मलाई देखाइएको छ कि प्रतिस्थापन पैकिंग शामिल छैन।
म मान्दछु कि म सही बाटोमा छु जहाँ सम्म 'सुरुवात' समस्या चिन्ता छ।
बुझाउने ttravis मा शुक्र, 09 / 15 / 2017 - 23: 57
जवाफ ठीक छ, जवाफको लागि धन्यबाद ... by gameroomfan
यहाँ केहि प्रतिस्थापन छ ...
यहाँ केहि प्रतिस्थापन पैकिंग छ: https://www.amazon.com/s/ref=as_at?imprToken=SkxdL8dTeRyLD5isJEtUSQ&slo…
बुझाउने माइक एल मा शनि, 04 / 21 / 2018 - 19: 56
मेरो दाजुभाइको रोशनीको पुनर्स्थापनामा मेरो हात प्रयास गर्न जाँदैछ, रंगबाट 54 जस्तो देखिन्छ। यसमा पहिलो टाइमर। यदि तपाईंले 25 वर्षमा वा चलाईएको ईन्जिनियरिङमा दौड्नु भएको छैन भने, त्यहाँको खण्डको लागि सिफारिस गरिएको सबै भागहरू (कार्ब पुनर्निर्माण, प्लगहरू, बिन्दुहरू, कन्डेनर, कन्फेलरहरू, प्रोसेलर। किटमा म जरुरी छ कि आवश्यकता समावेश गर्दछ। किटको लागि कुनै पनि सुझावहरू वा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ छ? साथै स्टार्टर रस्सी र वसन्तमा योजना।
बुझाउने Starfish229 सोम मा, 08 / 27 / 2018 - 12: 57
खेल स्कट 1962 सुरु हुनेछैन
मैले भर्खरै एक परिवारको डुङ्गा पाएको छु जुन 25 वर्षको लागि पानीमा छैन। मैले यो सुरू गरेपछि एक पटक घुमाउन सुरु भयो यो बन्द हुँदैन। यो सुरूवात तरल प्रयोग गरेर सुरु हुनेछ तर मोटर दौडिराख्ने छैन।
मैले 1962 स्कट मोटर को लागि एक मैनुअल खरीद गरें र केहि सलाह को आवश्यकता को चाहिए कि म अगाडी कसरि गर्नु पर्छ।
म स्पार्क्स प्लगहरूसँग नयाँ ब्याट्री परिवर्तन गर्दछु म अर्को प्रयास गर्नुपर्छ जुनमा म संघर्ष गर्छु।
कुनै सल्लाह वा म यसलाई एक ठाउँमा लिनको लागि लिनु पर्छ?
नदी नदीले टीएलसीलाई चाहिन्छ
बुझाउने ttravis मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 10 / 28 - 2018: 22
5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी-17 परियोजना Bosse "बो" Petersson द्वारा
PROJECTS मेनुमा फेसबुक साइटबाट थप थप / आयात गरिएको।
5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी-17 परियोजना Bosse "बो" Petersson - स्टकहोम, स्वीडेन द्वारा
बुझाउने boatman350 Wed, मा, 01 / 23 / 2019 - 10: 36
हे सबैले सबैलाई सबैलाई सोध्न चाहन्छ कि 2019 मा तपाइँका परियोजनाहरूको बारेमा सोध्न र तिनीहरू कसरी सबैलाई नयाँ नयाँ वर्ष धन्यवाद जाँदैछन्
बुझाउने लुईस वाल्लिंग गुरु मा, 03 / 14 / 2019 - 18: 03
एकल लाइन प्रणालीमा डबल लाइन ईन्टरनेट प्रणालीको रूपान्तरण
म एक 10 एचपी 1957 जॉनसन Seahorse एक डबल लाइन ईंन्धन प्रणाली संग छ। म यसलाई एकल लाइन प्रणालीमा बदल्न चाहन्छु। म ईंधन पंप भन्दा अन्य को आवश्यकता के केहि भागहरु को आवश्यकता छ? यदि मलाई एक कार्बोरेटर चाहिन्छ भने यो भागको लागि नामकरण गरिएको छ?
बुझाउने बेनामी (प्रमाणित छैन) मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 03 / 22 - 2020: 18
ईन्धन पम्प रूपान्तरण - पम्पले काम गरिरहेको छैन?
ईन्धन फिल्टर जल निकासी र स्पष्ट रूपमा भरिने छैन।
पहिले, यस फोरम को लागी धन्यवाद! यो आउटबोर्ड पुनर्निर्माण गर्न मा मेरो पहिलो प्रयास हो र यो पृष्ठ एक अद्भुत स्रोत हो। यो मेरो जॉनसन सीडी १ 14 हो, तपाईको परियोजनामा ​​विस्तृत विवरण जस्तै, र मैले तपाईले पोस्ट गर्नु भएको प्रत्येक तस्वीर र निर्देशनहरू प्रयोग गरे। केवल अपरिहार्य।
म एक लीक प्रेशर ट्या tank्कबाट आधुनिक एकल-लाइन ट्या tank्कमा रूपान्तरण गर्‍यो, कार्बको माथि इन्धन पम्पको लागि मेरो आफ्नै ब्र्याकेट बनायो र सबै ईन्धन लाइनहरू मार्गमा मिलाउन सफल भयो ताकि सबै कुरा पर्याप्त क्लीयरन्ससँग मिल्छ र म काउलिling्ग फिर्ता राख्न सक्छु।
मैले भर्खरै मेरो शुरुवात गरें, र यो चल्छ, तर ईन्धन फिल्टर मैले ईन्धन ट्या tank्क र ईन्धन पम्प बीचको आगमन ईन्धन लाइनमा थपिरहेको छ र मोटर चालु भइरहेको बेला पम्पबाट पुनः भरिने छैन। म ट्या tank्कमा बल्बको साथ लाइनहरु पम्प गर्छु र फिल्टर फिल, र साथसाथ कार्बमा गिलासको कचौरा फिल्टर। एक पटक मोटर चलिरहेको छ, ईन्धन लाइन मा फिल्टर पूर्ण देखि खाली जान्छ। म भन्न सक्दिन कि ईन्धन पम्पले कुनै ईन्धन प्रदान गरिरहेको छ वा यदि यो केवल एक ट्रिक्सेल मात्र हो, तर यसले काम गरिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ।
केवल एक मात्र कुरा मैले सोच्न सक्छु कि मैले g वटा गैलन ईन्धन ट्या filled्क मात्र भर्छु यो परीक्षणको लागि इन्धनको एक क्वार्टर, र हुनसक्छ ट्या in्कमा रहेको पिकअप "स्ट्रु" पर्याप्त मात्रामा डूबिएको छैन, तर म हेर्न चाहन्छु कि कसैको विचार छ कि छैन। । म सम्भवतः अर्को हप्ता वा मा इन्धन को एक पूर्ण गैलन मिश्रण र फेरि प्रयास गर्नेछ।
सबैलाई पुन: धन्यबाद। मैले यो वेब पृष्ठ र फोरमको अन्वेषण गर्न म साँच्चिकै रमाईलो भएको छु।
ज्याक बी, इलिनोइस
जवाफ ईन्धन पम्प रूपान्तरण - पम्पले काम गरिरहेको छैन? by बेनामी (प्रमाणित छैन)
सेवन मनिफोल्ड "रूपान्तरण"
ईन्धन पम्पको लागि नाडी सिर्जना गर्न यसैले मैले इन्टेक मनिफोल्डलाई परिमार्जन गरे। यो एक अल्युमिनियमको सानो टुक्रा हो जुन मैले ह्याक आरासँग काटे र फाइलको साथ आकार दिए। यसको पछाडि पुरानो मनिफोल्ड गस्केटको सानो टुक्रा छ यसको सील बनाउनको लागि (मैले सबै गस्केटहरू प्रतिस्थापन गरेको थिएँ जब यसलाई पुनर्निर्माण गर्थें)।
बुझाउने ttravis सोम मा, 03 / 23 / 2020 - 19: 11
तथ्य यो छ कि तपाइँ पम्प गर्न सक्नुहुन्छ ...
तपाईं बल्बलाई पम्प गर्न र ईन्धन लिन सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यले मलाई तपाईंको ट्या OK्क ठीक छ भन्ने लाग्छ। म दुइटा कुरा सुझाव दिनेछु:
पहिले, म तपाईंलाई जाँच गर्नेछु कि तपाई पम्पमा जाने लाइनमा राम्रो दबावको नाडी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
दोस्रो, म इक्वेसनबाट ईन्धन फिल्टर हटाउनेछु जब सम्म तपाईं कामहरू पाउनुहुन्न र फेरि यसलाई पुन: सम्मिलित गर्नुहुन्न।
ती महान चित्रहरू हुन् र सबै चीज ठीक देखिन्छ। एकचोटि तपाईसँग काम गर्ने चीजहरू भएपछि, म तपाइँको टिप्पणीहरू वास्तविक पृष्ठमा समावेश गर्न चाहन्छु। मलाई पोष्ट राख्नुहोस्।
बुझाउने बेनामी (प्रमाणित छैन) मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 03 / 22 - 2020: 19
ईन्धन पम्प माउन्टिंग ब्रैकेट
मेरो घर पम्प माउन्ट बनाइएको।
यो ईन्धन पम्प हो जुन म प्रयोग गर्दैछु, साथै ब्राकेटको एक तस्वीर पनि मैले एल्युमिनियम स्टकको शीटबाट बनाएको छु। यसले मोटरमा दुईवटा स्क्रूको प्रयोग गरेर माउन्ट गर्दछ जुन स्टार्टर रेकइल सम्मेलनलाई होल्ड गर्दछ। मैले आकार र स्थिति पत्ता लगाउनु अघि मैले केही कोष्ठकहरू बनाउनुपर्‍यो जसले सबै ईन्धन लाइनहरू र पम्पलाई काउलि .्ग अन्तर्गत फिट गर्न अनुमति दियो, तर यो सबै फिट हुन्छ र ढक्कन चल्छ र यस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ।
बुझाउने ttravis सोम मा, 03 / 23 / 2020 - 19: 03
जवाफ ईन्धन पम्प माउन्टिंग ब्रैकेट by बेनामी (प्रमाणित छैन)
राम्रो देखिन्छ। धेरै राम्रो ...
राम्रो देखिन्छ। मेरो भन्दा धेरै राम्रो!
बुझाउने बेनामी (प्रमाणित छैन) सोम मा, 03 / 30 / 2020 - 14: 25
म jw-11 3hp मा काम गर्दै छु ...
म jw-11 3hp मा काम गर्दैछु जोन्सन त कसैले पुल सुरू गर्न को लागी भाग रेखाचित्र हुन्छ? अग्रिम धन्यवाद!
बुझाउने ttravis मा मंगल, 03 / 31 / 2020 - 11: 45
जवाफ म jw-11 3hp मा काम गर्दै छु ... by बेनामी (प्रमाणित छैन)
भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद ...
भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद।
यहाँ एक छ भाग मैनुअल। यहाँ तपाइँको लागि उपलब्ध अंशहरूको सूची छ Jw-11.
तपाईं मेरो H HP हेर्न पनि सक्नुहुन्छ ट्युन-अप प्रोजेक्ट.
बुझाउने बेच मा शुक्र, 04 / 24 / 2020 - 16: 49
लाइटविन बलकी थ्रोटल
'66 लाइटविन भर्खरै सुरु र रन हुनेछ। तर थ्रोटल माथि / डाउन सार्ने इन्जिनलाई मार्दछ जब सम्म एकदम ढिलो समायोजित हुँदैन। नयाँ प्लगहरू र कार्ब पुनर्निर्माण गरियो। म सोच्दै छु कि यो स्पार्क retard / अग्रिम हो? कुनै सल्लाह?
बुझाउने Stroman63 मा शनि, 04 / 25 / 2020 - 14: 54
भ्यानकुभर ब्रिटिश कोलम्बिया बाट अभिवादन। म पहिले यो जस्तै सँगै यस्तो साइट राखेकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिएर सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईंको सामान्य विवरणहरू र तस्विरहरू बिना म मेरो पहिलो प्रोजेक्ट लिन सक्दिन। त्यो मेरा बुबाहरू १ 19583ईभिन्रुड h एचपी थियो। यो storage 55 बर्ष को लागी भण्डारण मा बसेको थियो, तर तपाइँको साइट संग यो फेरि छ र चलिरहेको छ। मलाई यो गर्न निकै रमाइलो भयो कि मैले बग पाएँ र अब पुरानो १ 1950 style० को शैली / रंग फिक्स गर्नका लागि रोक्न सक्दिन। यो फेरि चालु भएको सन्तुष्टि साथै डु्गामा व्यक्तिको साथ कुराकानीले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई रमाईलो बनाउँदछ। तपाईंको सहयोगको साथ चित्रमा सबै मोटर्स एक पटक फेरि महान धावकहरू हुन्।
१ 19575वाइकि XNUMX h एचपी।
१ 1955 5.5 जॉनसन .XNUMX..XNUMX एचपी।
१ 1958 5.5 जॉनसन .XNUMX..XNUMX एचपी।
१ 19583Evinrude XNUMX hp।